Ny fampahalalana rehetra hitsidihana ny tranombakoka Madame Tussauds | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | kolontsaina
Androany dia te hiresaka aminao momba ny Muse Museum aho Tussauds izay hitanao any New York. Raha mandeha any New York ianao dia tsy ho diso ny fitsidihana tsy maintsy atao ao amin'ity tranombakoka ity satria ho afaka haka sary ny tenanao miaraka amin'ny olona malaza tianao indrindra ianao ao Hollywood ary toa efa niaraka taminy ianao / izy. Hialona ny namanao Facebook sy Twitter!
Mety efa naheno momba an'i Madame Tussauds ianao ary izay malaza indrindra eran-tany. Ny zavatra tsara indrindra dia tsy amin'ny faritra iray eto amin'izao tontolo izao no ahitana azy fa hitanao amin'ny toerana samihafa toa an'i Amerika, Eropa, Azia ary koa Aostralia. Io no tranombakoka akaiky indrindra eto an-tany noho ny habetsahan'ny olona malaza sy malaza. Ny foibe foiben'ity tranombakoka ity dia any Londres ka tena zava-dehibe izany, saingy misy orinasa any amin'ny tanàna hafa araka ny nolazaiko teo.
1 Tranombakok'i Madame Tussauds
2 Jereo ny ora, ny vidiny ary ny fampahalalana hitsidihana ny Museum Madame Tussauds
2.1 Ahoana ny fomba ahazoana
2.2 Rehefa misokatra ny tranombakoka
Tranombakok'i Madame Tussauds
Raha mitsidika ity tranombakoka ity ianao rehefa mankany New York, dia azo antoka fa ho traikefa izay tsy hohadinoinao izany ary tianao ny hankafy indray raha miverina ianao. Ny vidiny dia tsy mora nefa mendrika ny mandoa azy ireo hiaina ny traikefa amin'ny fitsidihana ny tranombakoka. Ny vidin'ny biraon'ny boaty sy ny vidin'ny Internet dia miovaova kely araka ny hitanao amin'ireto teboka manaraka amin'ity lahatsoratra ity.
Ny tranombakoka dia miorina ao amin'ny Times Square ary rehefa mitsidika azy ianao dia toa tsy misy faran'ny tarehimarika satria hahita mihoatra ny 200 ianao, saika tsy misy! Saingy na dia betsaka aza ny tranombakoka toy izao, ny tranombakoka any New York Madame Tussauds dia raisina ho iray amin'ireo mozea savoka tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Ho an'ity fampahalalana ity fotsiny, dia ilaina ny mandray an-tsoratra ny làlan-kaleha fialantsasatrao, andro iray voatokana hitsidihana ny tranombakoka.
Rehefa tonga ao amin'ny tranombakoka ianao dia ho tianao ny fandraisana azy ireo nomanin'izy ireo miaraka amin'ny efitrano mahafinaritra Miaraka amin'ny atmosfera toy ny hoe efitrano fialantsasatra mahafinaritra ianao ary afaka maka sary ny tenanao amin'ireo olona malaza tadiavinao, dia toa nifanena tamin'izy ireo ianao mba hivoaka hanao fety ary hankafy ny alin'ny New York miaraka amin'ny haitraitra sy glamor!
Aorian'ny efitrano fandraisam-bahiny dia azonao atao ny mahita ny sisa amin'ny tranombakoka, izay ahitanao ny filohan'i Etazonia, mpitendry mozika malaza, atleta malaza, sinema malaza ... hanome anao ny fahatsapana fa ao amin'ny trano feno ny ankamaroan'ny olona malaza eto amin'izao tontolo izao. Fa ny tsara indrindra Ho afaka hihaona amin'i Obama tenany ao amin'ny Biraon'ny Oval ... Ho moana ianao raha mijery azy fotsiny.
Saingy mbola ho avy ny tsara indrindra, ary raha tianao ny fihetseham-po mafy dia afaka mankafy efitrano tsy mampino ianao hahafahanao mahazo ny adrenalinina rehetra ao anatinao, satria afaka mizara fotoana vitsivitsy amin'ireo tarehimarika ianao avy amin'ny 'Scream'… Fa misy koa ny tena mpilalao sarimihetsika hanome anao tahotra tsara!
Jereo ny ora, ny vidiny ary ny fampahalalana hitsidihana ny Museum Madame Tussauds
Ny zava-dehibe tokony ho fantatrao dia ny fomba hahatongavana any ary ho an'izany na dia fantatrao aza fa ao amin'ny Times Square izy io, ilaina ny hahalalanao ny adiresy marina: 234 West 42nd Street, eo anelanelan'ny làlana faha-7 sy faha-8. Misy fijanonana metro sy bus maromaro any an-toerana, ka tsy hanana olana ianao raha manapa-kevitra ny ho tonga amin'ny fitateram-bahoaka.
Ohatra raha te handeha amin'ny metro ianao mandra-pahatongan'ny 42nd Street-Times Square dia mila manaraka ny làlan'ny metro 1, 2, 3, 7, N, Q, R, W ary S. Etsy andaniny, raha te-ho tonga amin'ny 42nd Street & 8th Avenue ianao dia ianao dia tsy maintsy mandray ny làlan'ny metro A, C ary E) na raha te-hiditra amin'ny 42nd Street & 6 Avenue ianao, dia ny B, D, F ary ny V.
Raha toa ianao ka iray amin'ireo olona tia mandeha amin'ny bisy, dia tsy maintsy hitady ireo andalana ianao: M6, M7, M10 M20, M27, M42 ary M104.
Rehefa misokatra ny tranombakoka
Misokatra isan'andro ny Museum an'i Madame Tussaud ka rehefa mandeha any New York ianao dia tsy hahita vintana fa nakatona io. Na andro toy ny Krismasy aza dia misokatra ihany koa. Manana fandaharam-potoana manomboka amin'ny folo maraina ka hatramin'ny valo hariva ny alahady ka hatramin'ny alakamisy ary manomboka amin'ny folo maraina ka hatramin'ny folo alina amin'ny zoma sy asabotsy, Roa ambin'ny folo ora hankafizana ny tranombakoka! Na dia efa mampitandrina anao aza aho fa tsy ilaina ny mandany fotoana be dia be ... afaka ora vitsivitsy dia ho hitanao ny zava-drehetra.
Zava-dehibe ny fahalalana ny vidiny mba hahafahanao manitsy azy amin'ny teti-bolanao. Fa ny vidiny dia mihodina eo anelanelan'ny vidiny isan-karazany izay marihiko etsy ambany:
Tapakila ho an'ny olon-dehibe: 36 euro
Tapakilan'ny zokiolona (mihoatra ny 60 taona): 33 euro
Ankizy eo anelanelan'ny 4 sy 12 taona: 29 euro
Ankizy latsaky ny 3 taona: afaka
Ankizy mihoatra ny 13 taona: mandoa vola rehefa lehibe.
Ny tapakila dia azo vidiana amin'ny Internet avy amin'ny tranonkala ofisialy https://www2.madametussauds.com/new-york/en/tickets/ izay ahitanao fonosana vitsivitsy hiaina ilay traikefa faran'izay mafy. Ireo fonosana dia mety ho lafo kokoa na ambany arakaraka izay ateriny anao isaky ny fonosana. Tsy mila mijery fotsiny izay ao anaty fonosana tsirairay ianao ary manombatombana raha mendrika izany na raha tsy misafidy ny hividy ny tapakila tsotra fotsiny ianao.
Raha ara-dalàna raha mividy ny tapakila an-tserasera ianao dia afaka mamonjy 15% raha oharina amin'ny vidiny tany am-boalohany. Ao amin'ny biraon'ny boaty, azonao atao ny mandoa vola amin'ny vola, miaraka amin'ny carte de crédit, miaraka amin'ny carte de debit ary koa amin'ny carte d'exploitation, satria mety aminao izany.
Misy ihany koa ny fidirana sasany izay nantsoina 'rehetra Access Mandehana 'ary miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka miditra amin'ny Wax Museum, manintona roa mitovy amin'izany, sinema amin'ny 4D misy vinavina maromaro ary manintona izay miresaka momba ny tantara an-tsarimihetsika biômera mampihorohoro amerikana. Ity tapakila ity dia azo vidiana tokoa, saingy mila ho fantatrao hoe inona izao no mendrika ho fantatra raha liana ianao na tsia.
Ity misy horonantsary YouTube hanome anao hevitra momba ny mety ho zavatra niainana:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Ora, vidiny ary fampahalalana hitsidihana ny tranom-bakoka Madame Tussauds